HomeWararka CiyaarahaManchester United oo diiday in Xidiga Daniel James uu ka tago kooxda
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inaysan qorsheyneynin inay fasaxdo Daniel James inuu ka tago kooxda xagaagan.
Xiddiga heerka caalami ee dalka Wales ayaa ku dhibtooday inuu qeyb joogto ah ka noqdo qorshayaasha Ole Gunnar Solskjaer , waxaana imaatinka Jadon Sancho la filayaa inuu sii xadido waqtigiisa ciyaareed.
Sidaas darteed, James ayaa loo saadaaliyay inuu dhameystiri doono ka dhaqaaqista Old Trafford xagaagan, iyadoo Leeds United iyo Brighton & Hove Albion ay labaduba lala xiriirinayo inay lasoo wareegayaan.
Si kastaba ha ahaatee, The Sun ayaa warinaysa in Solskjaer uu ka caga jiidayo inuu fasaxo 23-sano jirkaan madaama dhibaatada Marcus Rashford ay sababi karto inuu seego qeyb ka mid ah xilli ciyaareedka.
James ayaa haatan u saxiixay Red Devils ilaa 2024 isagoo ikhtiyaar u ah sanad dheeri ah, laakiin warbixinta ayaa intaas ku dareysa in madaxda Old Trafford ay isku dayi karaan inay ku xiraan heshiis cusub.
Ciyaaryahankii hore ee Swansea City ayaa dhaliyay shan gool labo kalena caawiyay 26 kulan oo uu saftay xilli ciyaareedkii hore, waxaana uu ciyaaray 45 daqiiqo oo furitaankii kulankii saaxiibtinimo ee 4-2 ay uga badiyeen Queens Park Rangers sabtidii.